izingubo izingane ukhululekile kakhulu sika - ezikhululekile. Ngakho, T-shirt ukugqoka enesizotha, kungashiwo ezigugile futhi uhambo, futhi ekhaya. Futhi ingane akuyona yini ingubo ukhululekile kakhulu, ngoba kuyoba ukhululekile ngokwanele ukudlala njalo.
Ukukhetha zezingane t-shirts, akuvamile ukuba abazali bacabanga ngalokho basuke ukuthenga lapho ukhetha ukukholelwa ukuthi kwanele ukwenza izinto zibheda ngosayizi. Kodwa zidinga Ukukhetha niqaphelisise. Yini okufanele Ngibheka lapho ukhetha zezingane t-shirts?
Ukuqala unaka lendwangu. Kufanele kube nje kusuka impahla yemvelo, kudlule umoya, ngaphezu, ukuvikela isidumbu sengane okweqile kanye lwaluyophola. Inketho ekahle kungaba izikibha zezingane wenza zikakotini. Ahluke ukuthi uqine ngokwanele, kahle kusulwe futhi zimunce umswakama, zivikela hypothermia, futhi ilanga akabi.
Futhi kudingeka siyinake yefilakisi ekhethekile, ngoba muhle esikhunjeni sabo futhi bome ngokushesha. Kanye ngaphansi angcolile ngokungafani kuya ukotini efanayo.
Nakuba kubhekwe ukuba izingane ukhululekile kunazo sika T-shirts kusukela knitwear, njengoba le okokusebenza sisalokhu, ngaleyo ndlela ngeke esishwabene.
Ungakhohlwa futhi mayelana nekhwalithi izikibha. Udinga ukuba banake amalunga omzimba wakhe, okuyinto Kwakumelwe uqine ngokwanele. Uma ukhetha elikhanyayo onamileyo izikibha, umbala kanye iphethini kufanele kube ku iyunifomu yakhe idinga uku. Uma izinkinobho elibonisiwe noma buckles, kuyinto efiselekayo ukuthi babesebunzimeni phambi.
Buhle mikhiqizo itholakala sikhalo sabo ebonwayo, kanye iqiniso lokuthi angasetshenziswa ukudala i yokuqala, isithombe esiyingqayizivele eyofanelana izimfanelo umlingisi nezithakazelo ingane yakho. Figure ungakwazi sithathe preference ingane, nombhalo othi izonikeza ithuba lokubonisa izinkolelo zakhe noma abazali bakhe.
Ngokuqinisekile phezu ihembe kufanele kube khona ilebula yomenzi. Zama ukuthenga izinto ezitolo ezikhethekile, futhi hhayi ku-ukuhwebelana emakethe lapho ungakwazi kalula ukuthenga inkohliso yekhwalithi ephansi izimpahla.
Kubalulekile futhi ukuba siqaphelisise umklamo, njengezindawo ezigqamile isikibha esinobuso imidwebo ehlekisayo izingane ziyakuthanda aminingi ukudlula ezinombala ofanayo zizimbi. Acabangele timfuno kid uthole izingubo zakhe nalabo imidwebo nemibhalo eqoshiwe, okuyinto yena uthanda kakhulu futhi kuthandekile kuye.
Labo abafuna ukuba ingane yabo yayingaxhomekile kuphela amahle wekugcina, kodwa wabheka ekuqaleni, kubalulekile ukuba banake zezingane imfashini izikibha nge amahlaya. Abakwazi sithathe bonke ubudala - kusuka kakhulu imvuthuluka kusitshudeni ingane.
Ungakwazi banake "Deloras" inkampani izingubo. izingubo Izingane kulesi nomkhiqizi zenziwa nge zonke izinhlobo izithombe cartoon abalingiswa, futhi ephelezelwa ukudalwa izithombe ezintsha nge ezahlukene kwakunemibhalo eqoshiwe ezihlekisayo.
Ukuthenga ihembe, ungakhohlwa ukuthi kuqala kunazo zonke unakekele ingane. Ngakho-ke, kumelwe ukhethe into, kusukela iziqondiso ngenhla, kanye ecabanga imvuthuluka, mayelana izifiso zakhe futhi izithakazelo.
Amateki High phezulu: yini okufanele uyigqoke?
Cap - accessory esisemqoka wezigqoko wengane yakho
Elingenamikhono Wezingane - kusukela olunzima Ukuvikelwa isithwathwa
Izingubo eshibhe nge-Internet - kungenzeka
"Izimfihlo Little": okuthakazelisayo abadlali Turkish izithombe
Indlela yokwenza massage pad ngomntwana ngezandla zakhe
Isakhiwo imbewu apula. Botany: esikoleni esiphakeme
Umbadlana ASUS M2N: Uhlolojikelele, izici, izinhlobo nezilinganiso
Indlela ukukhetha indlu yokuhlala unomphela?
"Ravon-gentry": ukubuyekeza nempendulo. Ravon Gentra Machine
A futha kwegazi ngoba DHW: Incazelo kanye nezici
Udokotela wengqondo Svetlana Bronnikova: Biography futhi indlela
Hound Russian: Umlando kanye nezici ukuqeqeshwa